Nutty O Opihwa Mubayiro neAmerica Pakambo Kake, "Handipere Power"
Muimbi Carrington Simbarashe Chiwadzwa anozivikanwa nezita rekuti Nutty O uyo ane nekambo kakavhoterwa kuva kakakunda dzimwe nziyo dzose mugore ra2021 kanonzi "Handiperi Power" akaawana mumwe mubayiro kubva kumuzinda weAmerica muZimbabwe.
Nutty O akapihwa mubayiro uyu kumabiko eZimbabwe Music Awards anoitwa pagore kupa mibayiro kune vanenge vashura mare munyaya dzekuimba.
Vachitaura pamabiko aya nemusi weChitatu, vakafanobata chigaro chemumiririri weAmerica muZimbabwe VaThomas Hastings vakati vanofara zvikuru nekudyidzana kweZimbabwe neAmerica.
VaHastings vakatiwo nyika yavo inoda zvakanyanya kuti mumwe nemumwe awane chouviri pane zvaanenge achiita vachiti vaimbi vari mudambudziko rakanyanya sezvo vachirasikirwa nemari nekuda kwevanhu vanoba nziyo dzavo vachitengesa kana kuti piracy.
Nutty O akati ainge aine mufaro mukuru akarumbidza kudyidazana kwevaimbi nemuzinda weAmerica. Nutty O akatiwo ari kutarisira kudzidza nezveruzivo munyaya yekuchengetedza nziyo dzake zviri pamutemo kana kuti Intellectual property.
Aka ndekukutanga muzinda weAmerica muZimbabwe uchishanda neZIMA iyo yakaumbwa muna 2016 nechinangwa chekusimudzira vaimbi munyika pamwe nekuvapa mukana wekudyidzana nevamwe vekunze.